Iindaba - Ngaba abantu abenziwe iitattoo bakhetha izitikha ze tattoo？
Ngaba abantu abenziwe umvambo baya kukhetha izitikha ze tattoo？
Wonke umntu uqhelene negama elithi tattoo, akunjalo? Kule mihla, emehlweni abantu abaninzi, nabani na one tattoo emzimbeni uya kuthathwa njengomntu wentlalo. Uninzi lwabantu lukhethe ukufumana iitattoo kulandelwa into ebizwa ngokuba "ipholile" emehlweni abo. Iitattoos sele ziqhelekile kule mihla, njengamantombazana. Wonke umntu unentliziyo yokuthanda ubuhle, kodwa akukho kuzisola kweli hlabathi.
Kutheni usitsho lonto? Kuba uninzi lwabantu luyazisola emva kokufakwa itattoo. Kubuhlungu xa usenza itattoo, kwaye kubuhlungu ngakumbi xa ususa umvambo. Uninzi lwezibini ezitshatileyo zenza izinto eziphambeneyo ngexesha lothando, njengokufumana umvambo wesibini, kodwa ke malunga nokuqhekeka komtshato? Hlala njengesikhumbuzo? Nale ayizukusebenza, kuba ukuba awunayo le, uyakuba nayo elandelayo. Xa ususa umvambo, uya kuzisola.
Ngaba abantu abenziwe umvambo baya kukhetha izitikha zetattoo?
I tattoo nayo iyacinywa ukuba umbala uphela, kwaye ipateni iyatshintshwa ukuba awuyithandi. Umhleli unoxanduva lokukuxelela ukuba izitikha zeetattoo azinakuthatha ndawo. Izitikha zeTattoo zingumthandi, kwaye itattoo ngumntu ohamba ubomi bonke. Umahluko phakathi kwezi zimbini ucacile. Wonke umntu uhlala esithi: Unotywala? Ndinebali malunga neetattoos ...